Coronavirus: "Safka hore ayaa ku jiraa waxaana dareemayaa in la i qiimo tiray" - BBC News Somali
Coronavirus: "Safka hore ayaa ku jiraa waxaana dareemayaa in la i qiimo tiray"
Precious Omoruyi oo ka shaqeysa arrimaha daryeelka ayaa loo diiday in ay dukaan wax ka iibsato xilliga shaqaalaha NHS ay adeegtaan
Markii Precious Omoruyi ay subixii Axadda dhammeysatay 12-kii saacadood ee ay ka shaqeyneysay xarun daryeel oo ku taalla Glasgow, waxay aadday dukaanka Tesco si ay uga soo iibsato waxyaabo ay u baahneyd.
Gabadhan oo 22 sano jir ah, ayaa xilligii ay dukaameysaneysay waxay ku soo aadday waqti loo qoondeeyay qof u shaqeeya Waaxda Caafimaadka Bulshada UK ee NHS, balse waxay aaminsaneyd maaddaama ay tahay qof safka hore kaga jirta ka shaqeynta samafalka, inay xaq u lahayd inay tagto dukaanka.
Waxayse la fajacday arrintii ay kala kulantay dukaanka.
"Waxaan aaday dukaanka sababtoo ah waxba iima oollin guriga, habeenkii xigayna waan shaqeynayay," ayay tiri.
"Waxaa albaabka la igu weydiiyay kaarkeyga aqoonsiga balse sawir kuma dhegganeyn kaarkeyga, si ka duwan kaarka aqoonsiga NHS, waxaana la ii sheegay inaan gudaha geli karin. Waxaan tusiyay dharkeyga shaqada, oo aan watay, balse way iga diideen.
"Waan carooday oo waan niyad jabay balse ma dooneyn inaan la dagaallo; sidaas darteed waan iska soo baxay. Waxaan runtii dareemay in la i liiday."
Ms Omoruyi, ayaa aaminsan in shirkadaha sida Just Eat ay arrintaasi qeyb weyn ka qaateen iyagoo keliya qiimo dhimis u sameeyay shaqaalaha NHS.
"Waxaan dareemayaa in shaqaalaha daryeelka aan la siin wixii ay u qalmeen balse waxaan bixinaa dareel u dhigma midka NHS, khatartana waan kala simannahay," ayay tiri.
"Sidooda oo kale ayaan shaqo u aadaa, mar walbana waxaan rajeeyaa inuusan igu dhicin (fayraska)."
Waa sidee baaxadda waaxda madaxa bannaan ee daryeelka bulshada ee Scotland?
Waaxda waxaa ka shaqeeya in ka badan 103,000 oo qof - taas oo kala bar ka badan tirada guud ee shaqaalaha adeegga bulshada - oo ay ku jiraan qiyaastii 5,000 oo kalkaaliyeyaal ah
Waxay 88% waxay daryeel siisaa dadka waaweyn
Waaxda ayaa 55% boqolkiiba, saacadaha daryeelka siisa dadka da`da ah
Waxaa laga soo xigtay: Scottish Care
Xigashada Sawirka, Stephen Crawford
Donald Macaskill wuxuu sheegay in shaqaalaha arrimaha daryeelka ka shaqeeya ay xaq u leeyihiin in ay dareemaan in la yasay
Xarunta Scottish Care, oo wakiil ka ah 400 oo ururro madax bannaan ah, ayaa sheegtay in sheekadan aysan keliya ku dhicin Ms Omoruyi.
Madaxa xarunta Donald Macaskill ayaa yiri: "Shaqaalaha waaxda daryeelka xaq ayay u leeyihiin inay dareemaan in la liiday.
"Inkastoo xanuunka safmarka ah ee Covid-19 uu sare u qaaday muhiimadda daryeelka bulshada ayna u muuqato inuu wax ka beddelay aragtidii laga aaminsanaa, haddana waxaan weli dareemeynaa inaan si fiican looga war heyn mudnaanna aan la siin shaqaalaha daryeelka bulshada.
"Qaar ka mid ah dukaamadeenna waxay u diidaan shaqaalaha inay yimaadaan saacadaha gaarka ah sida shaqaalaha NHS, waxaana jira ururro si maalinle ah u siiya adeegyo gaar ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka balse iska indho tiraya shaqaalaha daryeelka bulshada.
"Tani waa niyad jab iyo marin-habaabin. Adeegyada daryeelka bulshada iyo shaqaalahooda waxay door muhiim ah ka qaataan taageeridda isbitaalladeenna si loo xakameeyo xanuunkan safmarka ah waxayna daryeelaan qaar ka mid ah bukaannada ugu nugul."
Markii wax laga weydiiyay siyaasaddooda ku aaddan dukaameysiga subaxa Axadda ee ay u aqoondeeyeen keliya shaqaalaha NHS; afhayeen u hadlay Tesco wuxuu sheegay in shirkadda aysan lahayn wax qorshe ah oo haatan mudnaanta lagu siinayo shaqaalaha waaxda madaxa bannaan.
Dukaanka Iceland ayaa sidoo kale "saacado gaar ah" u aqoondeysay shaqaalaha NHS, sidoo kalena ma laha qorshooyin degdeg ah oo shaqaalaha kale ee daryeelka bulshaa loo siinayo adeeg kaas la mid ah.
Shirkadda ayaa barteeda internet-ka ku soo qortay: "Waan dareemeynaa baahida loo qabo in sidoo kale xilligan mudnaan la siiyo shaqaalaha daryeelka bulshada, isla markaana xushmad ballaaran iyo mahad celin lagu siiyo waxa ay qabanayaan.
"Balse haatan way xaddidan tahay waxa aan qaban karno annagoo ah dukaan yar, xilligan ay baahida badan jirto, iyadoo ay tahay in maanka lagu hayo in UK ay ku nool yihiin 1.1 milyan oo u shaqeeya NHS iyo 1.6 milyan oo dheeraad ah oo ka shaqeeya daryeelka bulshada.
"Sidaas darteed waxaan go`aan ku gaarnay inaan xilligan mudnaanta siinno keliya shaqaalaha NHS iyo dadka da`da ah iyo kuwa nugul, balse waxaan raadin doonnaa qaab aan ku caawin karno dadka kale.
Dukaanka Iceland wuxuu ka mid yahay kuwa waqti gaar ah u qoondeeyay shaqaalaha NHS
Dukaamada kale, sida Sainsbury iyo Morrisons, ayaa sidoo kale shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee NHS, siiyay xilliyo gaar ah oo ay dukaameystaan.
ASDA, oo bishii hore ku dhawaaqday inay mudnaanta siineyso shaqaalaha NHS maalmaha gaarka ah ee toddobaadka ka mid ah, ayaa Jimcihii sheegtay inaysan sidaa ula jeedin oo ay mudnaanta siinayaan dhammaan shaqaalaha daryeelka bulshada.
Shirkadda Just Eat, oo ka mid ah shirkadaha badan ee qiimo dhimista siiya keliya shaqaalaha NHS (25%), ayaa sheegtay inay ka fakareyso inay beddesho siyaasaddeeda.
Scottish Care ayaa rajeyneysa, in xanuunkan safmarka ah uu wax ka beddeli doono sida ay bulshada u aragto shaqaalaha daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa nugul.
Coronavirus: Keligay iyo maalmihii karantiinka
6 Abriil 2020
Maxay tahay diyaaradda burburtay ee ay kala baratamayaan Maraykanka iyo Shiinaha?
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 28 Jannaayo 2022